Zvemukati Zvekushambadzira Mibvunzo Yekubvunza uye Pindura | Martech Zone
Zvemukati Zvekushambadzira Mibvunzo Yekubvunza uye Pindura
Muvhuro, Zvita 2, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuNeUU ndeyekutarisisa kwakasimba kwemibvunzo yatinofanira kubvunza sevatengesi vezvinhu Muchiitiko cheichi posvo, ini ndaizopindura iyi mibvunzo seinotevera:
ani - zvinangwa zvedu vatsva uye vepakati vatengesi vezvinhu.
chii - iyi infographic pane yakakosha mibvunzo yako yemukati kushambadzira inofanirwa kupindura.
apo - isu tichashambadzira infographic pano uye tichagovana nayo munzira dzese dzemagariro, kusanganisira Pinterest uye StumbleUpon.
apo - tinoda kutsikisa pakati-mangwanani kuti tibatanidze nevhoriyamu yakakura yevaverengi munyika yese.
Sei - yedu saiti inozivikanwa nekugovana yakakura kushambadzira infographics uye yave nzvimbo yemhando kwavari.
sei - kugovana iyi infographic kubva AboutUs inopa iyo yemukati mushambadzi ine yakakura chimiro yekuvandudza yavo zano. Ini ndaizoenda ku 7 Matanho Ekugadzirisa Zviri Mukati inotevera kugadzira chirongwa chakazara!
Tags: nezveduzvinomanikidza zvemukatizvemukati infographicContent Marketingzvemukati kushambadzira infographicseikushambadzira infographicchiiapoapoanisei
7 Matanho eAkagadziriswa Optimendi Yekushambadzira Siti
Poken: Kukurudzira Networking kuCorporate Zviitiko
Sep 1, 2014 na3: 02 PM
Ndingangoita nharo kuti yekupedzisira nhanho (kunyatsorova iyi kunze kwepaki) kwaizove kutaura kune mumwe munhu 1-1 kuti awane zvakaderera pasi. Shamwari yangu yakaita izvi naMateu Bucher - uyo akavamba rakabudirira manejimendi manejimendi manejimendi kubva pasi kumusoro